ငါးနှစ်ကျော်အတွင်း ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားပြဿနာ ၂ဝဝဝ ခန့် တိုင်ကြားမှုရှိ၊ ပြည်ပ မထွက်ခွာမီ ကာက? - Yangon Media Group
ငါးနှစ်ကျော်အတွင်း ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားပြဿနာ ၂ဝဝဝ ခန့် တိုင်ကြားမှုရှိ၊ ပြည်ပ မထွက်ခွာမီ ကာက?
ငါးနှစ်ကျော်အတွင်း အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနသို့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ပြဿနာပေါင်း ၂ဝဝဝ ခန့် တိုင်ကြားလာကြောင်း အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်အေးအေးမိုးက ပြောသည်။
၂ဝ၁၃ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၈ သြဂုတ်လအထိ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားပြဿနာပေါင်း ၁၉၄၄ မှု တိုင်ကြားလာကြောင်း အာဆီယံနိုင်ငံများအနက် မြန်မာနိုင်ငံသည် လက်ရှိအချိန်၌ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုအမြင့်ဆုံး ဖြစ်နေသော်လည်း လုပ်သားများအနေဖြင့် ကြိုတင် အသိပညာဖြင့် ကာကွယ်လိုသူလွန်စွာ နည်းပါးနေကြောင်း အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရွှေ့ ပြောင်းသွားလာခြင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း (MRC) တို့ ဆောင်ရွက်ထားရှိသည့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အသိပညာပေးရုံး (IOM)သို့ လာရောက်သည့် အ လုပ်သမားအလွန်နည်းပါးကြောင်း ဒေါ်အေးအေးမိုးက စက်တင်ဘာ ၃ ရက်တွင် ပြောသည်။
”ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမယ့်သူ တွေက ပြည်ပမထွက်ခွာမီ ရွှေ့ ပြောင်းသွားလာတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့တွေကလာမေးရင် တော့ MRC ရုံးတွေက သေချာဝန် ဆောင်မှုပေးပြီး ဖြေပေးနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ တော်တော်များများတော့ ရောက်မလာကြဘူး။ သွားလာတဲ့ အခက်အခဲကြောင့်လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ နောက်ပြီးသူတို့က ရုံးတွေနဲ့ အထိအတွေ့နည်းကြတယ်။ အဲဒီတော့ ရောက်မလာကြဘူး။ သို့ ပေမယ့် ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုတော့ အစ်မတို့ကအပြည့်အဝ အကူအညီပေးပါတယ်။ ဒီရုံးတွေမှာလာဆွေး နွေးတာ တော်တော်လေးတော့ နည်းသေးတယ်။ ရွှေ့ပြောင်းသွား လာတဲ့သူတွေက ကျေးလက်ဒေသ တွေကများတယ်။ အဲ့ဒီဒေသ တွေအထိကို အစ်မတို့က မက် ဆေ့ခ်ျကိုရောက်အောင်ပေးဖို့ လို နေတာ အဲ့လိုပေးနိုင်ပြီ သေချာ သိလာကြပြီဆိုရင် သူတို့တစ်တွေက အစ်မတို့ ရုံးတွေကိုဆက်သွယ်လာကြမှာပေါ့နော်” ဟု ညွှန်ကြား ရေးမှူး ဒေါ်အေးအေးမိုးက ပြောသည်။
MRC ရုံးကို ၁၃ ရုံးအထိ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ထားသလို စက်တင်ဘာ ၃ ရက်ကလည်း ရန်ကုန်မြို့ ဒိုင်းမွန်းကွန်ဒိုတွင်အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း များအား Training ပေးလျှက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။ ”မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းက တော်တော်လေး ကိုများတယ်။ သန်းခေါင်စာရင်း အရတောင် ၄ ဒသမ ၂၉ သန်းရှိတယ်။ ဆိုတော့ ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းနီး ပါးလောက်ရှိတယ်။ အာဆီယံ ဒေသတွင်းမှာဆိုရင် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုက မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆို အများဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။ သို့ပေမဲ့ မြန်မာကရွှေ့ပြောင်း ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က တရားမဝင်လမ်းကြောင်းကသွားနေတယ်” ဟု IOM ၏ National Liaison & Programme Officer ဦးအောင် ကျော်သန်းက ပြောသည်။
မြစ်သာ ရေလှောင်တမံ စီမံကိန်းကို စစ်ဆေးပြီး ဥပဒေ မလိုက်နာသူများအား အရေးယူပြီးမှသာ တောင်းခံ??
“တောကျီးကန်း”ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေ အများကြီး ရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ ??
မုံရွာမြို့ပေါ်ရှိ ဈေးကြီးသုံးဈေး ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရန် သီးသန့်ငွေကို လာမည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တ??
နိုင်ငံခြားနှင့် နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် လုပ်ငန်းပေါင်း ၁၂ ခု ခွင့်ပြုပေးခဲ့